Phandeeyar Labs – Civic Tech Field Guide
Accelerators, Build something, Hubs, The People
Published on October 1st, 2018 02:48 pm
Phandeeyar isacommunity tech hub that is fostering Myanmar’s technology & innovation ecosystem. We run an Accelerator,aMakerspace &aco-working facility.
ဖန်တီးရာမှာ မတ်လ ၄ ရက်နေ့က Open Data Day ကို စည်စည်ကားကားနဲ့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခုကျင်းပခဲ့တဲ့ Open Data Day က နိုင်ငံတကာပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး Friedrich Ebert Stiftung၊ ဖန်တီးရာ နဲ့ The Asia Foundation တို … Game Dev Challenge Press Release – Myanmar
ပြည်တွင်းရှိလူငယ်များကိုယ်တိုင် ဂိမ်းများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီ ဖန်တီးရာတွင်ပြုလုပ်သည့် ၉ ရက်တာ Game Dev Challenge ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် လူငယ်များ ယှဉ်ပြိုင်ဖန်တီးထားသော ဂိမ်းများကို အများပြည်သူတို့အား ပ … Demo Day 2018 ; Accelerator cohort 2
Phandeeyar Accelerator, Myanmar’s first ever startup accelerator, held Demo Day 2018 for the Cohort2on March 29. Around 18 founders from7different startups of the Cohort2pitched in front of loca …